Mont Tremblant သွားလည်ရအောင် ~ စန္ဒကူး
ကနေဒါ၊ Quebec ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အရမ်းလှတဲ့ Mont Tremblant ကိုခေါ်သွားပါအုံးမယ်။
ဒီဘက်ပြည်နယ်မှာတော့ ပြင်သစ်စကားမတတ်ရင်မေးမြန်ပီးသွားရတာ အဆင်သိပ်မပြေဘူး။ Tom Tom နဲ့ ဆိုရင်တော့ သိပ်စိတ်ပူဖို့မလိုဘူးပေါ့။မှတ်မှတ်ရရ..အဲဒီနေ့က thousand islands.. ကနေပတ်ပြီးသွားဖြစ်တယ်။
လမ်းတစ်လျှောက်မှာ အရောင်စုံတဲ့ သဘာဝသစ်ပင်တွေရယ်။ စပျစ်ခြံတွေရယ်.. ၀ိုင်လုပ်တဲ့ အသေးစားလုပ်ငန်းလေးတွေရယ်.. အရမ်းကိုသာယာ လွန်းတယ်..
တောင်ပေါ်စ မတက်ခင်မှာတော့ အပန်းဖြေလူနေအိမ်တိုက်ခန်းတွေရယ်၊ ဟိုတယ်တွေရယ်၊ စားသောက်ဆိုင်တွေရယ်.. စင်တင်တေးဂီတဖျော်ဖြေနေတာတွေ... သီချင်းဆိုတဲ့သူက ဆို... အောက်မှာ က နေတဲ့သူက က...အပူပင်ကင်းမဲ့ပြီး အေးအေးချမ်းချမ်းပျော်ရွှင်နေကြလိုက်တာ.. ရောက်ဖူးတဲ့ နေရာ တွေ ထဲမှာ ဒီနိုင်ငံကို သဘောအကျဆုံးဖြစ်သွားတယ်။ (ဆောင်းမ၀င်သေးလို့ လဲဖြစ်မယ်) ...
တောင်ထိပ်ထိရောက်အောင် မှန်လုံ cable car နဲ့ တောင်ထိပ်အထိရောက်အောင် တက်တဲ့တစ်လမ်းရယ်။
တောင်အောက်ခြေမြို့လေး တစ်လျှောက် အခမဲ့ ကြိုးရထားလေးတွေစီးပြီး ပတ်ပတ်လည်ဆောက် ထားတဲ့ အပန်း ဖြေစခန်းနဲ့ ကစားကွင်းတွေ၊ လူနေတိုက်ခန်းတွေ ဆိုင်ခန်းတွေကို အပေါ်စီးကနေလည်းကြည့်လို့ရပါသေးတယ်။
တောင်တစ်ဝက် လောက်အထိကို အမိုးအကာလွတ် ကြိုး ရထားလေးနဲ့ တက်ပြီးမှ .. လက်တွန်း ဆိုင်ကယ်လိုမျိုးလေးနဲ့ တောင်ပတ်လမ်းတစ်လျှောက် စီးပြီး အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာတာရယ်။
နှင်းကျတဲ့အချိန်တွေဆို နှင်းလျှောစီးဖို့အကောင်းဆုံးနေရာ တစ်ခုပေါ့။
ဒါကတော့ တောင်ထိပ်က နေ အောက်ဖက်ကိုမြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းတစ်နေရာမှာပေါ့။
ဘာလို့ ခွေးလေးတွေလိုက်ရိုက်လာလဲဆိုတော့... လူတော်တော်များများ ခွေးတစ်ကောင်ဆီ ဆွဲပြီး လမ်းလျှောက် လာတာတွေ့လို့ပါ.. ဒီနိုင်ငံမှာ ခွေးတော်တော်ချစ်သလား...အထီးကျန်လို့ဘဲ ခွေးမွေးကြ သလား တော့ ကျွန်မသေချာမသိဘူး.. ကျွန်မလဲ ခွေးဆို အရမ်းချစ်... လမ်းမှာ လူတွေခွေးလေးတွေ ကြိုးနဲ့ဆွဲလာတိုင်းအရောင်စုံ..ပုံစံစုံနဲ့ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ခွေးလေးတွေကိုငမ်းတာ ခေါင်းတစ်ခု
ရေးချင်တာတွေကတော့ အများကြီးဘဲ... အဲဒီတောင်ပေါ်မှာတောင်ထိုင်စဉ်းစားခဲ့သေးတယ်.. အခုတော့ ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိ.. ပြန်စဉ်းစားလို့မရတော့ဘူး.. ..း)
Posted by Sandakuu at 8:30 AM
In 1987 on 1st August,I went trip around thousand islands and fort Henary.I enjoyed the whole day. At 10 o'clock that night,it started my labour pain and i delievered my 1st son next day.Wonderful! your post recall my memory back.What about St. Joseph in Montreal.
မကူးတော့ သိပ်ပျော်နေခဲ့မှာပဲ။ ဖြောင့်ဖြူးညီညာတဲ့ လမ်းကလေး နဲ့ဘေးက အ၀ါရောင် အရွက် ရှုခင်းတွေကြား ကားမောင်းချင်စရာလေ။
ဓါတ်ပုံတွေ သိပ်လှတယ် မမကူး။
ရှဲလို့ ကျေးဇူးပါ။ ခရီးသွားရတာသဘောကျတော့ ဒါမျိုးတွေဆို သိပ်သဘောကျပါတယ်။
ကြုံလို့ ...ဂျီးဒေါ်..မှတ်မှတ်ရရသားဦးလေးပေါ့နော်..း)
ရှုခင်းတွေ လှတယ်။ တို့လဲ ဒီမှာ တစ်ရက်လောက် country ဖက် လျှောက်သွားချင်သေးတယ်။ ကျေးလက်ရှုခင်းကို ကြည့်ပြီး လေကို တ၀ကြီး ရှူချင်တယ်။
ွGyidaw... Montreal, Toronto, Ottawa & Vancouver trip post i'm still arranging pics..
ကြောင်ဖြူများရှင်.. နာမည်တွေ့တာတင်သဘောကျသွားပီ.. ညီမလေး လား... မောင်လေးလား..
ှုIora & T Sweet.. မြို့ပြထဲက ထွက်ခဲ့ပါလေ...း)) မြို့ထဲမှာ ဓာတ်ပုံရိုက် ရင် တိုက်တွေဘဲရှိလို့ အပြင်ထွက်ပီး တစ်ကူးတစ်က ရိုက်ပါတယ်။ ပုံ..း))) ဟီးဟီးးးး
O.K.....Kuu,I'm waiting for all series.I had been those places except Vancouver.Sweet memory of my honey moon country:)Take your time...sis.Btw....i often make beansprout in your way.Tks
ကနေဒါ Quebec ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ Mont Tremblant ကိုအလည်ပို့ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ စန္ဒကူးရေ။ သာယာကြည်နူးဖွယ်ရာ နေရာလေးတွေပဲနော်။
တီတင့် စပျစ်သီးဝိုင် မက်မန်းသီးဝိုင် စမ်းလုပ်ဖူးတယ်း)
ဘ၀မှာ အဲ့လို ကားမောင်းပြီးကိုယ်မရောက်ဖူးသေးတဲ့ နေရာတွေကိုသွားချင်တာ တအားပါပဲ ...
နိုင်ငံတချို့ရောက်ဖူးပေမယ့် ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းလို့ လျှောက်မသွားဖူးပါဘူး ...
ခရီးသွားလာရင်းဓါတ်ပုံရိုက်တာလဲ တအားကိုဝါသနာပါ ...
ခုအသက်အရွယ်အထိကတော့ မင်းကွန်းက ပုထိုးတော်ကြီး အပေါ်ကိုတက်ရတဲ့အရသာကို အကြိုက်ဆုံးပါ ...
အပေါ်ကနေဆို ဧရာဝတီမြစ်ကြီုးကိုကြည့်ပြီး လေတိုက်ခံရတဲ့အရသာကတော့ တော်တော်ကိုသဘောကျတာပါ ..
မစန္ဒကူးအနေနဲ့နောက်များမှာ ဓါတ်ပုံဒီ့ထက်ပိုထင်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ် ...
ကျွန်တော်က ဓါတ်ပုံဆိုကြိုက်တတ်လို့ပါ ...
အဲ့လိုနိုင်ငံတွေကိုတော့ သွားချင်ပေမယ့် ... လောလောဆယ်တော့ မဖြစ်နိုင်သေးလို့ပါ ...
အားပေးလျှက် ... အားပေးသူတစ်ဦး ...